အခြားသူများအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေရန် - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > နေ့-by-နေ့ > အခြားသူများအားကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်
Ich meine sagen zu dürfen, dass alle Christen von Gott gesegnet sein möchten. Das ist ein guter Wunsch und hat seine Wurzeln im alten, wie im neuen Testament. Der priesterliche Segen in 4. ကြွက် 6,24 beginnt mit: «Der Herr segne dich und behüte dich!» Und Jesus spricht oftmals in den «Seligpreisungen» in Mathäus 5: «Selig (gesegnet) sind…»
ဘုရားသခင့်ကောင်းချီးခံစားရခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရှာသင့်သည့်အခွင့်ထူးကြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်အဘယ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်နည်း။ ဘုရားသခင်ကောင်းချီးရဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းချီးရချင်ပါသလား။ ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်အတန်းကိုရရှိရန်? သာယာဝပြောမှုနှင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်သောင့်သက်သာနေထိုင်မှုပုံစံကိုခံစားရန်။
လူအများကတစ်ခုခုရရန်ဘုရားသခင့်ကောင်းချီးကိုရှာကြသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးသောအခါသူသည်သူတစ်ပါးအားကောင်းချီးပေးမည်ဟုသူရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ အခြားလူများလည်းကောင်းချီးခံစားရသင့်သည်။ အစ္စရေးလူမျိုးသည်လူမျိုးများအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ရမည်။ ခရစ်ယာန်များသည်မိသားစုများ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ အသင်းတော်များနှင့်တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးခံစားခဲ့ရတယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းချီးပေးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်အပြုအမူကိုပြုခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ကောင်းချီးပေးသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းချီးပေးမည်ဆိုလျှင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းချီး ထပ်၍ ကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်အားမည်သူနှင့်မည်သူကိုကောင်းချီးပေးနိုင်သနည်းဟုဘုရားသခင်ကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဘယ်ကြောင့်မမေးပါသနည်း။ တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အနည်းငယ်ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုဆိုသည်မှာဘာကိုကြိုတင်မသိရသနည်း။ ငါတို့မူကား၊